အွန်စောတို့ဌာနေ: Korea Culture Tour
မနေ့က PCNB ရဲ့ စီမံချက်နဲ့ (Cultural Tour) ဆိုးလ်းမြို့ ဂရောင်းဂီ ဂူလီမြို့နယ် အင်ချန်ဒုန်တောင်(경기 구리시 인창동 산) မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုအမွှေအနှစ်များထိမ်းသိမ်းထားရာ နေရာဖြစ်တဲ့ ရှေးယခင်ဘုရင်များနှင့် ဆွေတော်မျိုးတော်များ မြှုပ်နံထားရာ ဒွန်ဂူရွန်း သင်္ချိုင်းဂူများ(Donggureung Tombs) နှင့် Namyangju မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယား နာမည်ကျော် လက်ဦး အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဖြစ်တဲ့ ဒါဆန်း ဂျွန်ရိပ်ရောင်း (Dasan Jeong Yak-yong) နေထိုင်ရာ အိမ်နှင့် သူ့အသုံးအဆောင် နောက် မြှုပ်နှံရာ ဂူတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားရာ Dasan Jeong Yak-yong Cultural Center တွေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရေးသူ ဖတ်သူ နှစ်ဦး နှစ်ဘက်ရဲ့ အချိန်ကို ငဲ့ကွက်ပြီး အကျဉ်းမျှ သတင်းလေး ပေးချင်ပါတယ်။ ခရီးက တစ်နေ့ တာ ခရီးစဉ်လေးပါ။ ကျွန်တော်က စပ်စုချင်စိတ်နဲ့ မို့သာ အရောက်သွားခဲ့လိုက်ရတာ ပင်တော့ပင်ပန်းပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဆိုးမြို့ နဲ့ နှစ်နာရီနီးပါး ရထားခရီးမှာရှိတဲ့ ရယ်ဆန်မြို့ (Yesan City) မှာနေတာဖြစ်နေလို့လေ။ မနက်စောစောထပြီး သူတို့ချိန်းတဲ့ PCNB Office ကို မနက် ၉နာရီ ခွဲ အရောက် အပြေးအလွှားသွားခဲ့ပေမဲ့ နာရီဝက်နောက်ကြလို့ တစ်ဖွဲ့လုံး ကျွန်တော့်ကို စောင့်လိုက်ကြရတယ်။ အားတော့နာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခရီးစဉ်ကို ပြောပြတော့ သူတို့လည်း ကျွန်တော့်ကို ချီးကြူးပါတယ်။ အဝေးကနေ ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လာ တက်ရောက် ဆင်နွဲလို့လေ။ သူတို့ ထင်ထားတာက ဆိုးမြို့မှာ နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲ တက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာလေ။ တစ်ခြား အဝေးနေ နှစ်ယောက်တော့ တက်ရောက်တာတွေ့ရပေမဲ့ သူတို့က ဆိုးမှာ ညအိပ်စတည်းကြတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ဖွဲ့ကစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ အများက မှတ်မိသွားတာပေါ့။ ဟား---ဟား---။ ထားလိုက်ပါတော့။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ က မူလခရီးစဉ် နှစ်ညအိပ်သုံးရက် ခရီးမှာတုန်းက လူ ၄၁ ယောက် ပါ။ ဒီခရီးမှာတော့ ၃၀ တောင်မပြည့်တော့ဘူး ကျောင်းသားတွေ အုပ်စုကွဲကုန်ကြတာလေ။ NIIED ရဲ့ စီမံချက်အရ ဆိုးလ်မြို့တော်မှာ ယခင်တက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတော်တော်များများ တခြားမြို့ တွေ ပြောင်းကုန်ကြတာရော နောက် အထူးပြုဘာသာတွေ သင်ကြားနေကြရပြီဆိုတော့ တစ်ချို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်ကြတော့တာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
သူတို့ လိုက်ပြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြကွက် (Cultural Tour)အကြောင်း မပြောပြမီ ကျွန်တော်တွေ့တာလေးပြောပြချင်သေးတယ်။ အခါတိုင်းက ခရီးသွားလျှင် အထူးအမြန်ရထား (KTX) နဲ့ပဲ သွားနေကြလေ။ ဒီတစ်ခါတော့ ခရီးက စကဖြစ်နေတော့ သာမန်ရထား ( Mugongwha) ပဲ စီးခဲ့လိုက်ရတယ်။ သာမန်ရထားဆိုတော့ ဘေးဘီကို ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့။ စိုက်ပျိုးရေးသမားပီပီ စိုက်ခင်းလေးတွေမြင်တော့ သဘောကျတာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားစီးရင်း ပဲခူးတ၀ိုက် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြန်သတိယမိတယ်။ ဒါက စပါးခင်းတွေလေ။
မနက် ၅ နာရီအိပ်ယာထ ၆ နာရီမှာ ဘူတာသွား လက်မှတ်ဝယ် ၇း၂၇ မှာ ရထားစီး ၉း၁၈ မှာ ဆိုးလ်မြို့ ရောက် ၁၀ နာရီမှာ PCNB ကစီစဉ်ထားတဲ့ Korean Smile Travel ကားပေါ်ရောက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ Donggureung Tombs တွေရှိတဲ့ နေရာကို ရောက်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးရှေ့မှာ လိုက်လည် ရှင်းလင်းမဲ့ (Guide) အမျိုးသမီးက စောင့်နေပါတယ်။ ဒါက ဒီနေရာရဲ့ အချုပ် မြေပုံအညွှန်းလေးပါ။ ဒါက အားတက်သရော ကျွန်တော့်တို့ကို ရှင်းပြပေးနေတာပါ။
ဂိုက်က ကိုရီးယားလိုပဲ ရှင်ပြတာဆိုတော့ PCNB ရဲ့ဝန်ထမ်းငါးယောက်ထဲက သုံးယောက်က တစ်လည်းစီ သာသာပြန်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသားဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ပဲပါပါတယ်။ သူပြောတာလေး သဘောကြလို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ အပင်တွေက (Generation Gap) ကိုသက်သေပြနေတယ်တဲ့။ သမိုင်းဝင်အပင်ကြီးတွေနှင့် အခုမှ အသစ်စိုက်ထားတဲ့ အပင်ငယ်တွေ ရဲ့ကွာဟချက်က ကြီးနေတာကိုး။ ဒီပုံလေးကိုကြည့်မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူရှင်းပြရတာ ပင်ပန်းလို့ နောက်ဆုံး ဂူရောက်တော့ တစ်ယောက်ထည်း ဘေးထွက်ထိုင်လုပ်နေတာလေး။
ဒီတောင်တ၀ိုက်မှာက အားလုံး ဂူ ၉ ဂူရှိပါတယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို တော့ ၃ နေရာပဲ လိုက်ပြပေးပါတယ်။ ထူးခြားတာရယ် သွားလာလို့လွယ်ကူတာရယ်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီနေရာတွေပဲလိုက်ပြတယ်။ အောက်ဆုံးက ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ (A), (B), (C), (E) ဒီလေးနေရာပေါ့။ (A) က အ၀င်ဝရုံးပါ။ ဒီကနေစ၀င်လာလိုက်ပါတယ်။ ဂူတိုင်းနီးပါးပုံစံတူး ကြပါတယ်။ နည်းနည်းစီ ကွာခြားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ (B) This is the tomb of Prince Ikjong and Princess Jo. Prince Munjo, the son of King Sunjo (the 23rd king) (C) Hyeonneung Hyeonneung is the tomb of King Munjong (5th king) and Queen Gwon, (E) Geonwonneung This is the tomb of King Taejo, the first king of the Joseon dynasty ပါတဲ့။
ဂူတွေရဲ့ထူးအပြင်အဆင်က ဒီလိုပါတဲ့။ ဂူရဲ့ထိပ်တည့်တည့်မှာ ဂမူလေး(mount) တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီရှေ့မှာတေ့ာ (Sacrifice) လုပ်တဲ့ ကျောက်ပြား၊ ဘေးမှာတော့ သတ္တာဝါရုပ်တု (animal sculpture) တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဒါတွေအားလုံးဟာ ဂူနားကိုကပ်လာတာနဲ့အမျှ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေပဲ ကြည့်လို့မြင်ရပါတယ်။ ဂူအပေါ်ထိတော့တက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အနားထိတော့ချဉ်းကပ်ခဲလိုက်တယ်။ ဒါကတော့ နောက်မှာ အသက်ရှင်လျှက်ရှိတဲ့ဘုရင်နဲ့မိဖုရား က ကွယ်လွန်လေပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘုရင်ကြီး ဒီဂူပိုင်ရှင်ကို လာအလေးပြုတဲ့ လမ်းလေးပါ။
ဒီလမ်းလေးကလဲထူးခြားပါတယ်။ လမ်းနှစ်ခု ယှဉ်ထားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကလမ်းက လယ်ဘယ်မြင့်တယ်။ ကျယ်လည်းကျယ်တယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ ၀ိညာဉ် လျှောက်ဘို့ပါ။ ဘယ်သူမှ အဲဒီလမ်းပေါ်လျှောက်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့။ ညာဘက်က လမ်းလေးက နည်းနည်းကျဉ်းတယ်။ မြေလည်း နည်းနည်းနိမ့်တယ်။ အဲဒါကတော့ ဘုရင်နဲ့မိဖုရာ အတူယှဉ်လျှောက်ရာလမ်းပါတဲ။ အဲဒီလမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ ဘုရင်ကြီးက ညာလက်က အောက် ဘယ်လက်ကအထက် ရင်မှာကပ်ပြီး လျှောက်ပါတယ်တဲ့။ မိဖုရားကတော့ ဘယ်လက်အောက် ညာလက်အထက် ရင်မှာကပ်ပြီး ဖြေးညင်းစွာလျှောက်သွားပြီး ၀ပ်ပြုရာနေရာရောက်တဲ့အခါမှာ ညာခြေ အရင်တက် ဘယ်ခြေလိုက် ပုံစံနဲ့ တက်ပြီး အဆောင်ထဲဝင်ရာမှာ တခါးသုံးပေါက်ပဲရှိပါတယ်။ ဘုရင်နဲ့မိဖုရားဟာ ညာဘက်က၀င်ပြီး ဘယ်ဘက်က ပြန်ထွက်ရပါတယ်။ အဆင်းမှာ ဘယ်ခြေကအရင် လှမ်းဆင်းပြီး ညာခြေလိုက်ရပါတယ်တဲ့။ အလယ်တည်တည့်တခါးကတော့ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဘုရင်ကြီးဝင်ဖို့ဖြစ်ပြီး သူ့အတွက်တော့ ပြန်ထွက်စရာမလိုလို့ အထွက်တခါးမရှိပါဘူး။ ပြီးတာနဲ့ ဂူအနီးချဉ်းကပ်လမ်း ရှိပါတယ်တဲ့ ။ အခုတော့ မျက်တွေဖုံးနေလို့ အဲဒီချဉ်းကပ်လမ်းကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဂူထိပ်ပေါ်က အပြင်အဆင်တွေကိုတော့ ကြည့်နေရင်း ကွယ်ပျောက်သွားတာကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အနားကပ်သွားတာနဲ့ ဂူနဲ့ကွယ်သွားတာပါ။ ဒါက အဝေးကြည့်ပါ။ ဒါကတော့ အစောင့်အကြပ်တွေနေတဲ့ အဆောက်အဦးလို့ပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ နံပါတ် (E) ဂူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တခြား ဘယ်ဂူမှာမှမရှိတဲ့ ကျောက်တိုင် (Monument) နှစ်ခုရှိနေတာပါ။ ဘုရင်က ပြည်သူတွေ အလုပ်ဝန်ပိမှာစိုးလို့ ကြီးကြီးမားမား မလုပ်စေခြင်ဘူး။ ပြည်သူတွေက ကြည်ညိုလေးစားလို့ လုပ်ခြင်တယ်။ အဲဒီနှစ်ခု ကြားချပြီး ခပ်သေးသေး ကျောက်တိုင် နှစ်ခု လုပ်ထားတာပါတဲ့။ ဂူထဲမှာ ဘုရင်ညာ မိဖုရားဘယ်မြှုပ်တာပါတဲ့။ ဘယ်ကို ဦးတိုက်တယ်၊ ဘယ်ကိုခြေကန်တယ်ဆိုတာတော့ အသေးစိတ်မသိခဲ့ရဘူး။ မေးဘို့မေ့လာလို့။ ဟဲ--ဟဲ---။ ဒါက ညာဘက်က နဂါးနှစ်ကောင်နဲ့ ပုံပါ။ ဒါကတော့ ဘယ်ဘက်က နဂါး လေးကောင်နဲ့ ပုံပါ။ အသေးစိတ်ဖတ်လိုလျှင် အောက်မှာ မူရင်းကို ကော်ပီ(Copy) ကူပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ သွားကြည့်လို့လည်းရပါတယ်။
Donggureung (The East Nine Tombs) is located just east of the Seoul Metropolitan area. It was the burial ground of some of the Joseon (Chosôn) dynasty (1392-1910) kings and queens. Although there are nine mounds visible, there are actually six kings, nine queens, andaposthumously declared king and queen buried here. The earliest tomb was constructed here in 1403 and the latest in 1848. One historical highlight is the tomb of the dynastic founder King Taejo (Yi Seonggye).
All of the tombs are constructed in the same general style, withathree-part sequence that includesaceremonial gate at the front,aT-shaped sacrificial hall at the center, andalarge mound in the rear, the top of which is covered with smaller mounds and stonework.
A) Front Offices Although built inahistorical style, these offices are relatively new.
B) Sureung This is the tomb of Prince Ikjong and Princess Jo. Prince Munjo, the son of King Sunjo (the 23rd king), did not live long enough to reign. Munjo married at age 11 and died at 21. His father loved him greatly and orderedakingly tomb, or "neung", built for him. The prince was given the title of Ikjong posthumously. His widow Queen JO was buried here in 1890. Her tomb is to the right of Ikjong's tomb. Three years before Ikjong's death, the queen gave birth toason who later became King Heonjong, the 24th king. Dowager JO lived to be 81. She was responsible, with help from Heungseon, for installing Gojong on the throne as the 26th king in 1864.
C) Hyeonneung Hyeonneung is the tomb of King Munjong (5th king) and Queen Gwon. The raised walkway leading to the shrine has an extra right-angle turn. In addition to the usual stone fence, King Munjong's mound hasa12-sided retaining wall inside the fence.
King Munjong was an extremely learned man and published many books on Korean history. He was the son of King Sejong, considered to be the greatest of all Joseon kings. Munjong died at age 39 after reigning only3years (1450-52). Queen Gwon died in 1441 but her remains were interred here only in 1513.
D) Mongneung (off limits at time of visit) This is the tomb of King Seonjo (r. 1567-1608), Queen Bak, & Queen Kim. To the right of his tomb stand the twin tombs of Queen Bak and Queen Kim. The King's tomb hasa12-sided retaining wall and the Queen's tombs havearock fence. During King Seonjo's reign, the Japanese general Hideyoshi Toyotomi tried in 1592 to conquer Korea. Although this attempt failed, King Seonjo and his retinue were forced to flee north of Pyeongyang. Queen Bak died withoutason but Queen Kim boreason two years before Seonjo died.
E) Geonwonneung This is the tomb of King Taejo, the first king of the Joseon dynasty. Taejo, originally known as Yi Seonggye, founded the dynasty in 1392. He reigned from 1392-1398 and went into retirement. At his death in 1408, his fifth son King Taejong constructed his tomb. Unlike the other tombs, the stone horses stand directly behind, rather than beside, the civilian and military leaders.
F) Hwireung The tomb of Queen Jo, the second wife of Injo, the 16th ruler of Joseon. She became queen in 1638. Her husband is buried near Munsan with his first wife, since Queen Jo outlived the following two kings and died in 1688 during the reign of Sukjong, the 19th king.
G) Wolleung Wolleung is the tomb of King Yeongjo, the 21st ruler of Joseon, and his wife Queen Kim. Yeongjo died in 1778 at age 82. The son of Choe Sukbin,aconcubine of king Sukjong (19th king), Yeongjo acceded to the throne upon the death of Gyeongjong, his half brother and son of Jang Huibin. Rumor has it that King Gyeongjong died of eatingashrimp salad poisoned by Yeongjo, but there is no proof that Yeongjo was responsible. King Yeongjo reigned for 52 years, longer than any other king of the Choson dynasty. He is credited with many reforms but is often remembered for killing his own son, prince Sado, whom he accused of treason. Sado was forced to take his own life by climbing intoarice chest, in which he died of thirst nine days later.
H) Gyeongneung The tomb of King Heonjong, the 24th ruler of the Joseon dynasty, is the sole example ofatomb with three mounds enclosed inside the same wall. Heonjong became king at age seven and married Queen Kim at age 11. Queen Kim died when the king was 16. Two years later at 18, he married Queen Hong. King Heonjong reigned for 15 years (1834-49) and died at age 22. Both queens are buried in separate mounds to the right of the King's tomb. Queen Hong was the last member of the royal family to be buried at Donggureung. She died in 1904 at age 73.
I) Hyereung Here lie the remains of Queen Sim, the first queen of King Gyeongjong, the 20th ruler of the Choson dynasty (r. 1720-24). Gyeongjong was the son of the infamous concubine Jang Huibin. He suffered lengthy illness during his reign asaresult of (some say) harm in 1718 before her husband became king.
J) Sungneung (off limits at time of visit) Sungneung is the tomb of Hyeonjong, the 18th king of Choson. Queen Kim is interred inaseparate burial mound to his right. Hyeonjong became king in 1659. He reigned for 15 years (1659-74) and died at age 33. His only son Sukjong, who built the North Fortress, is buried at Seoreung.
Posted by Korea-Myanmar Mutual Benefit at 11:04 PM